Acer Predator 8, nosedraina ny takelaka ho an'ny mpilalao Acer | Androidsis
Hatramin'izao dia ny NVIDIA irery no mpanamboatra nandefa takelaka mazava mifantoka amin'ny mombamomba ny gamer. Araka ny nolazaiko, mandraka ankehitriny. Ary i Acer ve nanolotra ny takelaka misy azy Acer Predator 8 Ary taorian'ny fitsapana azy tao amin'ny IFA any Berlin, dia tsy ho tsara kokoa ny fahatsapana.
Rehefa miresaka momba ny fampisehoana an'ity takelaka vaovao ity ho an'ny mpilalao, hitanay fa manana potika be dia be izy io ary, taorian'izay andrana ny Acer Predator 8 Azontsika atao ny manome toky fa nahavita asa lehibe ny mpanamboatra.
1 Acer Predator 8, takelaka iray ho an'ny mpilalao
2 Toetra teknika Acer Predator 8
3 Daty sy famoahana ny daty
Acer Predator 8, takelaka iray ho an'ny mpilalao
Raha misy zavatra mazava, dia ny Acer no niasa mafy mba hahazoana antoka fa manana endrika mahaliana sy mamaky tany ity fitaovana ity. Porofon'izany ny fandaminana ireo mpandahateny, manome ny takelaka Acer Predator 8 a fijery futuristic sy mahery setra.
Fa raha manana endrika tsara ianao nefa vokatra ambany kalitao dia tsy araka ny antenaina ny valiny. Na dia tsy izany aza ny Acer Predator 8, a fitaovana feno tokoa ary izany dia hahafaly ireo tia lalao video.
Afaka nanomboka tamin'ny firesahana momba ireo efatra mahavariana izy mpandahateny miaraka amin'ny rafitra Predator Quadio miaraka amin'ny DolbyAudioTM Manolotra kalitaon'ny feo manaitra izy, mandalo ny efijery matanjaka manome kalitao mahavariana.
Izany dia tsy maintsy ampidirintsika efijery mahery vaika 8-inch izay mahatratra ny vahaolana feno HD ary manana Predator ColorBlast, rafitra iray nopantanan'i Acer izay manatsara ny fahombiazan'ny loko.
Ho fanampin'izay, Acer dia nampiditra fampiharana izay ahafahantsika manamboatra ny audio sy ny loko amin'ny efijery miankina amin'ny zavatra hataontsika (mijery sarimihetsika, milalao lalao ...).
Ny icing amin'ny mofomamy dia ny fitaovana mahavariana izay mampifandray ny Predator 8, manomboka amin'ny fony silikonika noforonin'i a Processor an'ny Intel Atom x7-Z8700, SoC tsy mampino izay misongadina amin'ny fizotry ny famokarana ao aminy 18 nm. Amin'izany dia tsy maintsy ampiana Intel HD GPU sy 2 GB RAM DDR3 izay mampanantena fa hisy lalao hilamina sy hilamina amin'ny takelaka lalao vaovao an'ny Acer.
Toetra teknika Acer Predator 8
lanja Gramin'ny 350
Fitaovana fananganana alimo sy polycarbonate
efijery 8 santimetatra miaraka amin'ny famahana 1920 x 1200
vidiny 349 euros
Avy amin'ny Acer dia nanamafy izy ireo fa ny Acer Predator 8 dia hahatratra ny tsena Espaniola alohan'ny faran'ny taona amin'ny a vidiny 349 euro. Takelaka tena mahaliana amin'ny vidiny tena mahaliana. Hanao ahoana ny valintenin'i NVIDIA?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Acer Predator 8, nanandrana ny takelaka lalao Acer izahay
Sony dia mamoaka Android Lollipop 5.1.1 OTA ho an'ny Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR ary Xperia Tablet Z
HTC dia manolotra smartphone vaovao, ny HTC Desire 728